Shiinaha Warshadda qaybta Kiniiniga, Qaybta Mashiinka Qaybiye
Kiniinnada caadiga ah iyo kiniinnada waxtar leh ayaa badanaa loo isticmaalaa wax soo saarka CBD ee suuqa.
Mashiinka Buuxinta Miisaanka Toosan
Mashiinka buuxa ee tooska u buuxiya dhalada toosan ee dhalada ah wuxuu ogaadaa isdhexgalka korantada. Dhalo otomaatig ah oo aan lakala goyn karin, kaniiniga riix, daboolka aan lagaran karin iyo daboolka oo la riixayo. Heerka otomatiggu waa kii ugu horreeyay Shiinaha. Mashiinka wuxuu qaataa xakamaynta shaashadda taabashada, way fududahay in la shaqeeyo oo si fudud loo ilaaliyo.
Mashiinka 'TF-80 Automatic Effervescent Tablet Tube Buuxinta & Mashiinka Mashiinka
TF-80 mashiinka kiniiniga buuxiya & mashiinka wax lagu xiro wuxuu isku daraa wax soo saarka xawaaraha sare leh habsami u socodka iyo tayada qiimaha. Waxay badanaa sameeysaa dhalo si otomaatig ah u jabsan, tirinta iyo buuxinta otomaatiga ah, goynta otomaatiga ah iyo shaqooyin kale oo loogu talagalay qaabka tuubada. Shuruudaha wax soo saarka wasakh la'aanta ah. Qalabkan ayaa si weyn loogu adeegsadaa cuntada, dawooyinka, kiimikada iyo warshadaha kale oo ay si fiican u soo dhoweeyaan macaamiisha. Mashiinka 'TF-80' ayaa ah xalka ugu fiican ee dufcado waaweyn iyo wax soo saar weyn.
ZWS137 Kiniiniga Xawaaraha Sare Deduster
Mashiinka baaritaanka xawaaraha sare ee ZWS137 wuxuu khuseeyaa mabaadi'da nadiifinta hawada ee la cadaadiyey, ka saarista budada bartamaha iyo rullaluistemadka geesaha wax lagu shiidayo si looga saaro budada iyo jeexjeexayaasha ku dhegan dusha sare ee wiishka, si markaa looga dhigo waferka dusha nadiifka ah iyo geesaha nadiif ah. gebi ahaanba ka go'doonsan sanduuqa korontada, oo leh qaab dejin dhakhso leh, oo ku habboon isu imaatinka, kala-goynta iyo nadiifinta; Qaybaha la xiriira daroogada waxay ka samaysan yihiin bir bir ah, oo buuxisa shuruudaha GMP ee qalabka dawooyinka.
SZS230 Deduster Sare
Model SZS230 Uphill Deduster ayaa sidoo kale shaqaaleeyay nashqado badan oo cusub, si loogu oggolaado loona hubiyo wax soo saar wanaagsan oo badbaado leh, Uphill Deduster wuxuu awood u leeyahay inuu u dhaqmo sidii mishiinka sare u qaadista iyo qashin-qubka, taas oo ka dhigtay isku-darka caadiga ah mashiinka kale ee kombiyuutarka cadaadiya iyo baaritaanka birta. mashiinka, oo waliba ka dhigay mid si aad ah loogu dabaqi karo qaybta farmashiyaha, injineernimada kiimikada, elektaroniga, iyo cuntada.
ZP Taxanaha Rotary Tablet Press
Codsiga ugu muhiimsan: Mashiinka ayaa ah mashiin laba-laab ah oo si otomaatig ah u rogaya mashiinka goos gooska ah kaas oo ka dhigi kara hadhuudhka in lagu cadaadiyo inuu noqdo gabal wareegsan, noqo jilayaal xardhan, qaabab gaar ah iyo rijeetada warqad cad oo midab leh. Waxaa badanaa loo isticmaalaa warqad dhakhtar soo saaray oo loogu talagalay shirkadaha warshadaha dawooyinka sida warshadaha kiimikada, cuntooyinka, elektaroniga. (Xusuusin: markaad soo saareyso gabal labo midab leh, waxay kaliya u baahan tahay bedelida qaybaha iyo ku darida qalabka nuugista budada taas oo si weyn hoos ugu dhigeysa qiimaha isla markaana kor u qaadeysa faa'iidada.)
ZPW Taxanaha Rotary Tablet Press
Mashiinkaasi waa Mashiinka Saxaafadda ee Xawaaraha Sare ee ugu dambeeyay ee warshadaha hadda jira, kaas oo horumarin iyo hal-abuurnimo salka ku haya guddiga iyo farsamada guriga ee ay soo saarto warshaddeena; leh xawaare sare oo si ballaaran loogu adeegsado cadaadiska kiniiniga caadiga ama cilladaha aan caadiga ahayn; waa mid caan ku ah dawooyinka, Kiimikada, Cuntada, Caaga elektaroonigga ah.
Taxanaha GZPK Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida
Qaybaha ugu muhiimsan ee golaha koontaroolka korontada ayaa ah qaybo dibedda laga keenay, PLC waxay aqbashaa alaabtii asalka ahayd ee Siemens, iyo isdhexgalka mashiinka aadanaha wuxuu qaataa Taisiemens 10-inch taxane shaashad midab taabasho ah.